Ezinye i-iPhone X 'zibamba ingqele' kwaye ziyeke ukusebenza | Iindaba zeGajethi
Ezinye i-iPhone X 'zibamba ingqele' kwaye ziyeke ukusebenza
URuben inyongo | | iapile, Iiselfowuni
Ayizizo iimeko ezizodwa: kukho abasebenzisi be-iPhone X entsha abafumana ukusilela kwizikrini ezihambayo xa amaqondo obushushu esihla; isikrini siyayeka ukusebenza imizuzwana embalwa emva koko sibuyele esiqhelweni. Ngaba iyakhathaza? Ewe, asazi isandla sokuqala, kodwa iApple ngokwayo iyayiqonda into yokuba ingxaki ikhona kwaye bayasebenza kwisisombululo sayo.
Ingxaki ivezwe kwiiforamu ze Reddit. Umsebenzisi uphawule ukuba xa wayephuma ngaphandle, apho iqondo lobushushu laliphantsi kakhulu, i-iPhone X yakhe yayineengxaki kwiscreen sayo. Ukuchaneka ngakumbi, umsebenzisi uthe "Iscreen siba mfutshane imizuzwana emi-2". Esi sibhengezo sinoxanduva kumalungu aliqela amaqonga aphuma ayovavanya iiyunithi zefowuni yeApple.
Isiphumo kukuba ukusebenza kwesikrini kwakuqhelekileyo kwaye kuqhelekileyo. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi Ityala lomsebenzisi lalingahlukaniswangaukusukela oko kwapapashwa Ibhlog kaLoop Babuza iApple ngqo. Impendulo yile ilandelayo:
Siyawaqonda amatyala apho isikrini se-iPhone X singaphenduli okwethutyana emva kokutshintsha ngokukhawuleza kwindawo ebandayo. Emva kwemizuzwana eliqela, isikrini siza kubuyela sibonise impendulo epheleleyo. Oku kuya kugutyungelwa kuhlaziyo lwexesha elizayo lwe- isoftwe.
Kwakhona, kwakupapasho olufanayo basithumela kwiphepha lenkxaso leApple. Iyayichaza loo nto amaqondo obushushu afanelekileyo okuba izixhobo ze-iOS zisebenze ngokufanelekileyo kufuneka abephakathi kwe-0 kunye ne-35 degrees Celsius; Ukuba isezantsi okanye ingaphezulu kunolu luhlu, isixhobo sinokubonisa isimilo esingaqhelekanga. Ngapha koko, kwimeko apho isixhobo sifikelele kubushushu obuphezulu, umyalezo wesilumkiso uvela kwiscreen sokuba iqondo lobushushu kufuneka lehle ukuze liqhubeke nokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ezinye i-iPhone X 'zibamba ingqele' kwaye ziyeke ukusebenza
Kubonakala ngathi umngxunya okwi-ozone layer uqala ukuvalwa
Isabelo esikufutshane yi-AirDrop Windows 10